गण्डकी प्रदेश Archives – Page 412 of 423 – Samacharpati Samacharpati गण्डकी प्रदेश Archives – Page 412 of 423 – Samacharpati
पोखरा, ३० जेठ । ४६ औं विश्व वातावरण दिवसको सन्दर्भ पारेर प्रकृति मान केन्द्रित जनअभियान नेपाल जिल्ला यूनिट कास्कीको आयोजनामा सितलादेवी सामुदायिक विद्यालयमा चित्रकला प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको छ । भावि पुस्ताको लागि पृथ्वी वचाऔं भन्ने मुल नाराका साथ आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता विदालयका ५० जना विद्यार्थीहरु ले सहभागिता जनाएका थिए । विश्वमा वढ्दै गएको पर्यावरणीय चुनौतीलाई […]
पोखरा, ३० जेठ । पोखराको सर्वेश्वरमार्गस्थित व्यवसायिहरुको टोली तीन दिने प्रवद्र्धनात्मक तथा अवलोकन भ्रमण सकेर पोखरा फर्किएका छन् । सर्वेश्वर व्यवसायि समितिको आयोजनामा पर्वत, बाग्लुङ्ग तथा म्याग्दीका व्यवसायिहरुसंग अन्र्तक्रियात्मक छलफल भएको हो । भ्रमणका क्रममा टोलीले कास्कीको नयाँपुल, पर्वतको कुश्मा बजार, म्याग्दीको बेनी र गलेश्वर तथा बाग्लुङ्ग र गलकोटका व्यवसायिहरुसंग अन्र्तक्रियात्मक छलफल गरेका थिए । म्याग्दीमा […]
पोखरा, ३० जेठ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं १७ र २१ जोड्ने फुर्सेखोला ट्रस्टपुलमा फलामी सामान उपलब्ध नहुँदा पुल निर्माणकार्यले तिव्रता पाउन सकेको छैन । पोखरा महानगरपालिका तथा एस.डब्लु.ए.पि नेपालको सहयोगमा निर्माणाधिन उक्त ट्रस्ट पुलको उपभोक्ता समितिद्धारा गर्ने काम सकिएको अवस्थामा फलामको सामान उपलब्ध नहुँदा कार्यले निरन्तरता नपाएको हो । गत बैशाख १९ गते औपचारिक […]
पोखरा, २९ जेठ । कास्की जिल्ला फेन्सिङ संघको मंगलबार भएको दोश्रो साधारण सभा तथा अधिवेशनले विजय शाहीको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ । संघको उपाध्यक्षमा छवि गुरुङ, सचिवमा संदिप वराल, कोषाध्यक्षमा विसान कार्की र सदस्यहरुमा नविन सुवेदी, शशिविक्रम पालिखे र विष्णुमाया गुरुङ सर्व सम्मत चयनभएका छन् । नेपाल फेन्सिङ संघकी […]
पोखरा, २९ जेठ । पोखराको उत्तमचोकमा गोली चलेको छ । लागूऔषध कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको हो । लागू औषध लिएर हिँहेको खबरपछि पछ्याउँदै गएको प्रहरीलाई नै आक्रमण प्रयास भएपछि प्रतिरक्षाका लागि गोली चलाएको प्रहरी निरीक्षक गणेश सुवेदीले जानकारी दिए । प्रहरीले चलाएको गोलीबाट गोविन्द थापा घाइते भएका छन् । खुट्टामा गोली लागेर घाइते […]
हेमजा, २९ जेठ । ७३ औ शाखाको रुपमा स्थापना भएको गरिमा बिकाश बैकं लि. हेमजा शाखाको एक कार्यक्रममका बिच बुधबार उद्घाटन भएको् छ । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथी नेपाल राष्ट्र बैकं क्षत्रीय कार्यलय पोखरा प्रमुख डा. डिल्लिराम पोखरेलले बैकंको सफल्ताको शुभकामना ब्यक्त गर्दै परिणाम भन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सोहि अबसरमा बैंकिंग क्षेत्रको […]
पोखरा, २९ जेठ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की बाट खटिएको टोलीले पोखरामा गोलि चलाएको छ । लागूऔषध कारोबार गर्ने (जोन) भनिने तीस बर्षीय गोविन्द थापालाई पक्राउ गर्नको लागि प्रहरी कार्यालय कास्की बाट खटिएको टोलीले उत्तमचोकमा गोली चलाएको हो । लागूऔषधसहित भेटिएका गोविन्द प्रहरी देखेर भाग्न खोजेपछि नियन्त्रणमा लिनका लागि गोली चलाउन परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय […]